Xamar Yaa Hanan Doona Itoobiyaan Amase Xamar Daye! (Faalo)
Friday November 07, 2008 - 12:18:47 in Maqaallo by Xarunta Dhexe
Xamar waxa ay noqotay meel ay dhibaato la daristay, una sii dheer tahay, wax yaabo badan oo ay ka midyihiin gaajo iyo cudurba, walina aan xal looheynin ay noqoto maahane "meel la isku qab-qabsado" una sii dheer tahay "dagaal joogto ah
Xamar waxa ay noqotay meel ay dhibaato la daristay, una sii dheer tahay, wax yaabo badan oo ay ka midyihiin gaajo iyo cudurba, walina aan xal looheynin ay noqoto maahane "meel la isku qab-qabsado" una sii dheer tahay "dagaal joogto ah oo aan dhamaad laheyn".
Xamar waxa ay aheyd xuduntii Soomaaliya oo dhan, amase hormoodkii ugu fir-fircoonaa Geeska Afrika kana hor marsaneyd wadamo badan oo ay kamid yihiin: kuwa maanta jooga xamar ee ku yimid macna gaara oo aanu badan keyn aanu fahan saneyn macnaha kadan beeya iyo aayatiinka danbe ee Soomaaliya. Nasiib darada maanta asiibtay
Dhulkeenii waxa ay noqotay meel ay Itoobiya ka taliso, hadba kii ka hor yimaadana ay tiraahdo kan ina dhaafiya waa uu nafahmee inta uusan dhib nookeenin. Waxa caado u'ah qofkii wax dhex mara Itoobiyaanka aakhirka iyagaa dila amase xira,
Meeyey kii horboodayey ee sheeganayey madax weyne in uu uyahay Dhulka Soomaali Galbeed ee Itoobiya ka taliso, nasiib daro maanta waa xiran yahay, kuwii kohoreeyena sidaas ayey u'carareen, hal nin oo hadda ah wasiir ku xigeyn Itoobiyaan ah maahane intii Madaxweyne ka soo noqday Soomaali Galbeed halkaas ayaa ka jira, isnaguna waxa uu uhayo manaqaan.
Marka ninkii is oranaya Itoobiyaan ayaa wax wanaag kula baadi goobaya, waxaan umaleenayaa in uu qof kaas doonayo,
meeldaran iyo reero muskood in uu ku meereesan doono, kadibna gacan tooda ku dan been doono. Xamar waa meesha kaliya si sahlan ay Itoobiyaanka nabad ugu joogi la yihhiin, kuna soo toosi la yihiin iyagoo bad qaba, taasa waa la waayey.
Mac naha loosameeyo maamulka Gobalka banaadir, waxa ay doonayaan iyagoo naash-naashoonaya oo waliba lagalbinayo in ay wadanka ka baxaan, Maamulkaasna ay noqdaan rag iyaga la shaqeeya oo aan dooneyn in ay ka horyimaadaan, halkuu rabo ha ka yimaadee, taas ayaa keentay in la yiraahdo afar iyo bar ha lagu qeybiyo maamulka Gobalka Banaadir.
Akhristayaasha waxaan weediinayaa ee Gobalka Banaadir. Qof reer Banaadir ah oo maamulada ka jiraGobaladda Soomaaliyeed Mayuu jiraa ? jawaabtu waa maya, Marka sidee oga mid noqonayaan maamulka Banaadir qof aan aheyn oo aan ku abtirsan Deegaanka Gobalka Banaadir?!
waxaan umaleenayaa waa yihii hore, in laga tagay qof walbana ay isaga utaalo aayihiisa iyo jiritaankiisaba, kii meel xun is dhiga, isagay utaalaa.
Qore cabdi cali